IINKWENKWEZI ZE-MICHELIN ZINIKEZELWE KWIINDAWO ZOKUTYELA EZISI-8 E-LA COUNTY, 1 E-ORANGE COUNTY - OKUNYE
Iinkwenkwezi ze-Michelin zinikezelwe kwiindawo zokutyela ezisi-8 e-LA County, 1 e-Orange County
Indawo entsha yokutyela eneenkwenkwezi ezimbini ibhengezwe yiMichelin ngohlelo lwayo lwaseCalifornia luka-2021.
I Michelin Guide California ubhengeze abamkeli yayo star for 202 1, ukuqaphela ezintlanu ezintsha zokutyela Michelin star kunye 22 entsha Michelin amabhaso star kuhlelo lwayo lwamva nje.
I-Addison e-Del Mar, i-Hayato e-Los Angeles kunye ne-Birdsong kunye ne-Harbour House e-San Francisco yaphakanyiswa kwiinkwenkwezi ezimbini ze-Michelin, I-lemon balm eSanta Monica luluhlu olutsha oluneenkwenkwezi ezimbini.
Indawo entsha yokutyela eneenkwenkwezi ezimbini ibhengezwe nguMichelin ngohlelo lwayo lwaseCalifornia luka-2021, phakathi kwabo kukho i-Birdsong eSan Francisco. (Ifoto nguCroissants kunye noCaviar, ngoncedo lwe-Birdsong)
Indawo entsha yokutyela eneenkwenkwezi ezimbini iye yabhengezwa nguMichelin ngohlelo lwayo lwaseCalifornia ngo-2021 phakathi kwabo iHarbour House eMendocino County. (Ifoto nguJoe Weaver, ngoncedo lwe-Harbour House)
Indawo entsha yokutyela eneenkwenkwezi ezimbini ibhengezwe nguMichelin ngohlelo lwayo lwaseCalifornia luka-2021 uHayato eLos Angeles uphakathi kwabo. (Ngoncedo lukaHayato)
Indawo entsha yokutyela eneenkwenkwezi ezimbini iye yabhengezwa nguMichelin ngohlelo lwayo lwaseCalifornia lowama-2021 kuquka nenkwenkwezi enye yeKnife Pleat. Umpheki uTony Esnault kunye nenkosikazi yakhe, indawo yokutyela uYassmin Sarmadi eKnife Pleat eSouth Coast Plaza eCosta Mesa ngoLwesithathu, Julayi 24, 2019. (Ifoto nguLeonard Ortiz, iOrange County Register/SCNG)
Indawo entsha yokutyela eneenkwenkwezi ezimbini ibhengezwe nguMichelin ngohlelo lwayo lwaseCalifornia luka-2021 uMelisse eSanta Monica uphakathi kwabo. (Ifoto nguJeff Couch, ngoncedo lukaMelisse)
Bonisa i-Captionye Yandisa
UMichelin ulungiselele ireel yokusabela ukuba ayithumele kwi-Instagram. Abapheki abafumana iindaba okokuqala bavakalise iimvakalelo zabo, ukusuka kuChef uTony Esnault kunye nerestaurateur uYassmin Sarmadi beqhwaba izandla kwaye bebetha phezulu ekhitshini leKnife Pleat eCosta Mesa ukuya kumkhwazo olula weBanzai! evela kuChef Morihiro Onodera waseMorihiro eLos Angeles.
Umnini-Chef uMinh Phan wasePhenakite eHollywood wancwina ngovuyo, emva koko wanika abasebenzi bakhe ngetyala. Liqela eli. Ngabo, basebenza nzima yonke imihla, utshilo.
IKnife Pleat yindawo yesithathu yokutyela eneenkwenkwezi kwiNqila yaseOrange - Taco maria kunye noHana Re bahlonitshwa ngo-2019 - kwaye bobathathu baseCosta Mesa, iseti yamva nje kwenye yezona ndawo zidumileyo zokuthenga eSouthern California.
I-South Coast Plaza iyayivuyela loo nto I-Knife Pleat iye yamkelwa inkwenkwezi yaseMichelin, elona gama libalaseleyo lokugqwesa kwezokupheka. Umpheki uTony Esnault, indawo yokutyela uYassmin Sarmadi kunye neqela labo elimangalisayo benze indawo ekhethekileyo yokutyela eMazantsi eCalifornia, utshilo uDebra Gunn Downing, umlawuli olawulayo weziko lezentengiso.
Kunyaka ophelileyo, ngenxa yokuba iindawo zokutyela ezininzi zivaliwe kwaye zithintelwe, uhlelo lweMichelin IsiKhokelo saseCalifornia aluzange lunikezele ngeenkwenkwezi kodwa igala elibonakalayo ngo-Okthobha liwonge uzinzo kwishishini kwaye yaqaqambisa iindawo zokutyela ezibalaseleyo ezithathwa njengezinto ezintsha ezifunyenweyo.
Kulo nyaka uMichelin ubhengeze iivenkile zokutyela ezazizizongezo ezintsha kwisikhokelo kwaye ezinye zazo zafumana izihloko zeBib Gourmand ngoLwesithathu, ngoSeptemba wama-22.
Ngokutyhila ezinye zezongezo ezintsha ezenziwe ngabahloli bethu unyaka wonke, siphucula izixhobo zethu zedijithali ukuqinisa ngakumbi amaqhina asibophelela kubathandi bokutya, uGwendal Poullennec, umlawuli wamazwe ngamazwe wezikhokelo zeMichelin uthe kumyalezo malunga nezongezo ezintsha kwi. iwebhusayithi yayo. Ukhetho olutsha luya kufumaneka kwakhona kwi-Michelin Guide iOS kunye ne-Android app.
Indawo yeBay's 50 Michelin-starred restaurants for 2021
I-Michelin 2021: I-Adega yaseSan Jose ifumana inkwenkwezi kwakhona; UBaumé ePalo Alto ulahlekelwa ziinkwenkwezi ezimbini
Izidlo zaseMichelin: iindawo zokutyela ezili-18 zeBay zijoyina uluhlu 'lufikelelekayo' lweBib Gourmand
UMichelin wawonga iindawo zokutyela ezili-10 zeBay Area 'njengezinto ezintsha ezifunyenweyo'
I 45 Bib Gourmands zikhethwe ngokwexabiso lemenyu. Nangona elo gama lingazange lize nankwenkwezi, iivenkile zokutyela zasekuhlaleni zakuvuyela ukukhethwa.
Le Bib Gourmand ithetha lukhulu kuthi kuluntu esilusebenzelayo, kodwa eyona nto iyenza ikhetheke kangaka kukubaluleka ekuthweleyo kwihlabathi jikelele, utshilo uDarren Coyle kamsinya nje emva kwesi sibhengezo. UCoyle uyasebenza Intsomi kunye noMoya eNewport Beach kunye nomfazi, uJean, kunye nabantwana, u-Ali no-Drew, kunye noChef David Shofner.
Ngo-2019, iMichelin yenza indawo entle yokungena yokuhlola ilizwe liphela ngeMichelin Guide yaseCalifornia, eyabhengezwa igala yolwandle etshizayo eHuntington Beach.
Nalu uluhlu lwabamkeli abatsha beenkwenkwezi kunye namanqaku athile avela kubahloli.
UGucci Osteria da Massimo Bottura, eBeverly Hills (entsha, inkwenkwezi enye yeMichelin)
Umpheki uMassimo Bottura ubeke uMattio Agazzi onetalente kwi-helm kwaye iziphumo ziyamangalisa ngokwenene. Oku kukupheka okukhawulezayo kwaye kusekelwe phantsi.
Hayato, Los Angeles (ukunyuswa ukusuka kwenye ukuya kwiinkwenkwezi ezimbini zeMichelin)
Isidlo sangokuhlwa apha ngamava asondeleyo kunye nokuzibandakanya kunye nompheki uBrandon Hayato Go. Uninzi lwezifundo zesi sidlo se-kaiseki ziqala ngezithako ezicwangciswe ngobuchule ekhitshini elingasemva kwaye zinikelwe kumpheki kwiitreyi, emva koko zigqitywe phambi kwamehlo akho kwaye zinike ingcaciso ecacileyo.
I-lemon balm, iSanta Monica (entsha, iinkwenkwezi ezimbini zeMichelin)
Igumbi lokutyela likaChef uJosiah Citrin libuyile kwaye liyasebenza - liyakhula. Ubuchwephesha bakhe bulele ekuhambiseni amava athile okutya okucolekileyo angaphumi kwisitayile. Lutshintsho oluthandekayo lwesantya kuye nabani na ojonge ukucotha, ukuzonwabisa kunye nokuthotywa ngabasebenzi benkonzo abanobuchule obuphezulu.
Morihiro, Los Angeles (entsha, inkwenkwezi enye yeMichelin)
Umpheki uMorihiro Onodera's omakase uvelisa isixa esinomtsalane sokutya okubandakanya izinto ezibulewe ngokugqibeleleyo njengeskwidi somlilo esine-wakame seaweed kunye ne-halibut sashimi ene-pink peppercorn. I-nigiri enezinongo ezincinci ezineenkozo ezinkulu ezichaziweyo zinokutyhila yonke into ukusuka kwihirame ecocekileyo, emhlophe ukuya kwimackerel enamafutha.
I-Pasjoli, iSanta Monica (ukunyuswa ukusuka kwi-New Discovery ukuya kwinkanyezi ye-Michelin)
Umpheki uDave Beran uye waphakamisa i-ante ngale bistro ekhangayo yaseFransi, apho imigangatho efana nesobho yetswele kunye ne-tartare yenkomo iphakanyiselwe kwiindawo zayo eziphezulu.
Pasta | Ibha, i-Encino (ukunyuswa ukusuka kwi-New Discovery ukuya kwinkanyezi enye ye-Michelin)
Ubuchule beli qela buxhomekeke kumandla abo okusebenzisa ngokupheleleyo i-bounty yendalo yaseCalifornia, eneziphumo ezivuyisayo, njengoko kubonwa kwi-cavatelli ene-glossy, ibhotela ye-lobster sauce, kunye ne-peas spring kunye neenqununu zenyama emnandi; okanye i-caprese ephakanyisiweyo ngendlela yeetumato ze-marigold, i-mozzarella, iintyatyambo zefennel kunye ne-avocado.
IPhenakite, iHollywood (ukunyuswa ukusuka kwiNew Discovery ukuya kwinkanyezi yeMichelin)
Umpheki uMinh Phan's Phenakite uhlala kwindawo yeofisi esebenzisanayo emiswe phakathi kwemithi kunye nesakhiwo esilondolozwe kakuhle. Incasa echubekileyo, ebukekayo kunye nobume besinye bubonakala kwimihlakulo kwindalo enzulu efana ne-mochi dumpling ene-lardon kunye ne-sugar snap peas.
I-Sushi I-naba, i-Manhattan Beach (ukunyusa ukusuka kwi-New Discovery ukuya kwinkanyezi enye ye-Michelin)
Umpheki uYasuhiro Hirano, kunye nenkosikazi yakhe ebaleka phambi kwendlu, unoxanduva lokuvelisa eyona sushi inomdla kakhulu. Umlingo wakhe ulele ekuhlanganiseni izinto ezimbalwa ezibalulekileyo, kuquka iintlanzi ezingaqhelekanga azidalayo phambi kokuba azilungiselele ngentaphane yezithako.
I-Knife Pleat , I-Costa Mesa (ukunyuswa ukusuka kwi-New Discovery ukuya kwinkanyezi enye ye-Michelin)
Wonke umntu ulapha ukuze umpheki uTony Esnault athathe ukutya okuqhelekileyo kwaseFransi, okuziswe kuwe ngabancedisi abachwephesha abajikeleza ngokujikelezayo kwiintshukumo ezilinganisiweyo. Imenyu ibalaselisa izitya ezithelekelelayo eziluka ubuchule ngobukrelekrele.
Ezinye iindawo zokutyela zaseCalifornia
Addison, Del Mar (ukunyuswa ukusuka kwenye ukuya kwiinkwenkwezi ezimbini zeMichelin)
Omncinci kunye noMhle, uCarlsbad (omtsha, inkwenkwezi enye yeMichelin)
Soichi, eSan Diego (ukunyuswa ukusuka kwiNtsha yokuFumana ukuya kwinkanyezi enye yeMichelin)
USushi Tadokoro, eSan Diego (ukunyuswa ukusuka kwiNew Discovery ukuya kwinkanyezi enye yeMichelin)
CENTRAL COAST NE SANTA BARBARA
Bell's, uSanta Barbara (ukunyuswa ukusuka kwiNew Discovery ukuya kwinkanyezi yeMichelin)
Ikhitshi yoVavanyo emithandathu, uPaso Robles (unyuso olusuka kuFundiso olutsha ukuya inkwenkwezi enye yeMichelin)
Sushi | IBar Montecito, iSanta Barbara (ukunyuswa ukusuka kwiNew Discovery ukuya kwinkanyezi yeMichelin)
Adega, eSan Francisco (ukunyuselwa kwenye inkwenkwezi yaseMichelin)
UAvery, eSan Francisco (ukunyuselwa kwenye inkwenkwezi yaseMichelin)
Barndiva, Sonoma (ukunyuswa kwenye inkwenkwezi yaseMichelin)
Birdsong, eSan Francisco (ukunyuswa ukusuka kwenye ukuya kwiinkwenkwezi ezimbini zeMichelin)
I-Harbour House, kwiNqila yaseMendocino (ukunyuswa ukusuka kwenye ukuya kwiinkwenkwezi ezimbini zeMichelin)
UMarlena, eSan Francisco (ukunyuswa ukusuka kwiNew Discovery ukuya kwinkanyezi yeMichelin)
UNiku Steakhouse, eSan Francisco (entsha, inkwenkwezi enye yeMichelin)
O 'nguClaude Le Tohic, eSan Francisco (entsha, inkwenkwezi enye yeMichelin)
Selby's, eSan Francisco (ukunyuswa ukusuka kwiNew Discovery ukuya kwinkanyezi yeMichelin)
USushi Shin, eSan Francisco (entsha, inkwenkwezi enye yeMichelin)
IShota, eSan Francisco (entsha, inkwenkwezi enye yeMichelin)